भान्सामा रुमलिएको पितृसत्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ ८, २०७६ सरू पोखरेल
छिमेकी दिदीले आडैमा भिडियो गेम खेलिरहेको थियो छोरोलाई, जो छोरीभन्दा तीन–चार वर्ष जेठो छ, नअह्राई कोठामा मस्त सुतिरहेकी छोरीलाई उठाइन्, मेरा लागि चिया पकाउन । उनकी छोरी चुपचाप उठेर भान्साकोठामा पसी ।
पितृसत्तालाई पुरुषले मात्र होइन, महिलाले पनि छोड्न नसकेको उदाहरण हो यो । सन्तानलाई आमाहरूले नै सिकाउँछन्, पितृसत्ता । पछि छोराले भान्साको काम केही नसघाउँदा भन्ने गर्छन्, ‘यो उमेरमा त छोरीले कति काम गर्थी !’
भान्सा भन्नेबित्तिकै महिलासँग जोडिएर आउँछ । समाज व्यवस्थामा जब मानिसको बसाइ स्थिर हुँदै गयो वा कृषि समाजको उदय भयो, तबदेखि नै महिलाको थप जिम्मेवारीमा केटाकेटी हुकार्उनुसँगै भान्सा व्यवस्थापन पनि रह्यो । बिस्तारै यो विषय महिलाका लागि आजीवन ठेक्कासरह भयो ।
भान्साको जिम्मेवारी महिलाको भागमा पर्नु एउटा पाटो भयो, त्यही भान्सा चलाउन महिलामाथि पुरुष नियन्त्रण र शक्तिको शृंखला तन्किँदै गयो । त्यसैले महत्त्वपूर्ण भएर पनि सो कार्य सहायक बन्दै आयो ।
खेतबारीमा पुरुषसँगै काम गरेर उस्तै थाकेका महिला घर फर्केपछि पुरुषले तमाखु हातमा लिएर बस्दा चुलोको धूवाँसँग पौंठेजोरी खेल्दै सबैका लागि खानाको व्यवस्थापनमा जुट्थे । सबैलाई खुवाएर अन्त्यमा आफूले बचेको खाने, जुठा भाँडा र जुठो चुलो चोख्याउने धन्दा सकेर सुत्दा अरूले एक निद्रा पुर्‍याइसकेका हुन्थे । यो क्रमले पछिसम्म निरन्तरता पाइरह्यो ।
कालान्तरमा भान्सा र कृषिकार्यबाट महिलाले उद्योग–व्यवसायमा खुट्टा हाल्न थाले । तर कार्यक्षेत्र जति विस्तार भए पनि भान्साको जिम्मेवारीबाट महिलाले कहिल्यै उन्मुक्ति पाउन सकेनन् । अहिले पनि श्रीमान्सरहकै आर्थिक र पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने महिला कार्यक्षेत्रबाट घर फर्केपछि श्रीमान् हातमा रिमोट र मोबाइल समातेर सोफामा आराम गर्न ढल्किँदा चिया, नास्ता र बेलुकाको खान्की निर्माणमा जुट्न बाध्य हुन्छन् ।
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ— द वे टु अ म्यान्स हार्ट इज थ्रु हिज स्टोमक (लोग्नेमानिसको हृदयसम्मको बाटो उसको पेट भएर जान्छ) । पुरुषको मन जित्न मीठो खुवाउनुपर्छ भन्ने आशयका यस्ता भनाइलाई पितृसत्ताले नै बढावा दिएको हो । महिलालाई खुवाउन सजिलो छ, लोग्नेमानिसलाई मीठो–मसिनो खुवाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भान्सा सम्हाल्ने हाम्रा आमा, दिदीबहिनीहरूमा अद्यापि छ । हामी र हाम्रा आमाहरू धेरै व्रत बसिरहँदा हाम्रा श्रीमान् र बुबाहरू भोको बसेको प्रायः देख्न पाइँदैन । आफू खाली पेट बसेको दिन पनि परिवारलाई पकाएर खुवाउने जिम्मेवारी भने महिलाकै हुने गर्छ ।
मेरी एक परिचित बहिनी छिन्, जसको भर्खर बिहे भएको छ । श्रीमान्–श्रीमती दुवै कानुन अधिकृत हुन् । माइतीमा एक्ली छोरी उनी । बिहे गरेको चौथो दिन आफैले तयार गरेको भान्सामा सबैले खाइसकेपछि सासूले भाँडाका पीँधमा बचेका खानेकुरा ‘अब तिमीले खाए हुन्छ’ भन्दा आफूले दुई गाँस पनि निल्न नसकेको उनी बताउँछिन् । कसै–कसैका घरमा छोरामान्छेहरूलाई दूध र महिलालाई चिया बाँड्ने चलन देख्दा लाग्छ— पितृसत्ताको मूलजरो भान्सामै छ । मीठो–मसिनो पुरुषको मुखमा परेपछि मात्र महिलाको भागमा आउँछ ।
अर्की एक बहिनी छिन्, अलि होचो कदकी । भान्सामा चिया पकाउन उनी पिरामा चढेको देखेपछि मैले कौतूहल राखें । उनले भनिन्, ‘अग्लो बनाइदिन लगाउनुभएछ बूढाले । आफू होचो मान्छे, यसमा नचढी त पकाउनै नमिल्ने !’
आफ्ना श्रीमान्को भान्सामा ढलेको भाँडो सोझ्याउने बानी पनि छैन भनिरहने ती बहिनीका श्रीमान्ले त्यही भान्साको संरचना निर्माणमा उनको सुझावसम्म लिएनछन् । भान्सा कुन आकारको बनाउने, बेसिन, धारा वा टायल कस्तो राख्ने, स्ल्याब कति अग्लो बनाउने भन्ने कुरामा समेत पुरुष निर्णय हावी हुन्छ । अरू विषयमा त निर्णय गर्न दिइएन नै, जीवनकै बढी समय बिताउने भान्साकोठा पनि आफूले भने बमोजिम हुँदैन ।
चाडपर्व होस् वा घरमा परपाहुना आएका बेला, गफगाफ र रामरमाइलो पुरुषको भागमा हुन्छ भने महिलाको भागमा सबैका लागि चिया, नास्ता र सत्कारको जिम्मेवारी । त्यसमा पनि भनेजस्तो नभए भन्ने गरिन्छ— कस्तो खानदानकी रैछ, राम्रो खातिरदारी पनि गरिन !
महिला घरबाहिर दुई दिन बस्दा घर सम्झिरहने मूल कारण भान्सा नै हुन्छ । के खाए होलान्, कति फोहोर पारे होलान् ! बिरामी भएकै बेला पनि भान्सामा उभिन बाध्य बनाइदिन्छ, महिलालाई पितृसत्ताले ।
एक बहिनी राम्रो अस्पतालमा नर्स थिइन् । बिहेपछि जागिर छोडिछन् । श्रीमान्ले ‘बेलामा गतिलो खान पनि पाइएन’ भनेर गुनासो गरिरहेपछि छोड्नुपरेको उनले सुनाइन् । अल्छे तिघ्रो, स्वादे जिब्रो ! आफू एक गिलास पानी सारेर खान जाँगर नचलाउने पुरुषले श्रीमतीका तर्फबाट भान्सामा भएको सानो कमजोरीलाई पनि ठूलो मान्छन् ।
हाम्रा हजुरबुबाका एक साथी हुनुहुन्थ्यो रे, जसले जेठी श्रीमतीको खाना राम्रो बनाउने ढंग नभएको भन्दै दोस्रो बिहे गर्नुभएको थियो भनेर मेरी हजुरआमाले कुनै समय भन्नुभएको थियो । अझै पनि बिहेका लागि केटीको योग्यतामा भान्सा व्ययस्थापन प्रायः छुट्दैन । महिलाका अरू योग्यतालाई पछार्न सफल हुन्छ, कमजोर भान्सा व्यवस्थापन । छोरोले एक कप चिया राम्ररी नउमाल्दा ‘यति पनि धन्न गरेको छ’Ù छोरी चाहिँ एउटा गोलो रोटी नबेल्दा ‘ढंग नभएकी’ !
चुरा बजेको हातको पो चिया मीठो ! फलानाकी श्रीमती बितिन्, चुलो निभ्यो ! भान्सा सम्हाल्नकै निम्ति बिहे गर्छ पुरुष । पत्नी बितेपछि पत्नीवियोगमा छटपटिए पनि भान्साकै बहानामा पुनर्विवाह गर्न राजी हुन्छन् लोग्नेमानिस, राजी गराउँछ पितृसत्ता ।
भान्सामा पाक्ने तरकारी करेसाबारीमा लगाउन किन महिलालाई मात्र जाँगर चल्छ ? रोजेर तरकारी खानुपर्ने पुरुष बजारबाट एक झोला तरकारी किन्न किन अल्छी गर्छ ? भान्सामा के–के आवश्यक छन्, के मिसाएर के खाना बन्छ, कुन खानामा के पोषण छ, केले तागत दिन्छ — पूरा व्यवस्थापनको जिम्मा महिलाले नै लिन्छन् । विडम्बना, यो कार्यलाई श्रम मान्ने गरिँदैन ।
पितृसत्ताले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि कठपुतली बनाइदिन्छ । पकाउनमा सोखिन मान्छेलाई ‘आइमाईको काम गरेर समय कटाउँछ’ भनिदिन्छ पितृसत्ताले । आफूसरह नै काम गरेकी श्रीमतीलाई विवेक गरेर चियाको भाँडो बसाइदिन, तरकारी केलाइदिन, भान्सामा अलिकति सहयोग गरिदिन खोज्ने श्रीमान्लाई जोइटिङ्ग्रे नाम दिएर हच्काइदिन्छ ।
पितृसत्ता यस्तो सोच हो, जसले महिलालाई पुरुषभन्दा निम्न दर्जामा राख्न खोज्छ । यो एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सरिरहँदा, सबैभन्दा ठूलो चीज खानु हो र पनि, भातभान्साको कार्यबाट उम्काइरहन्छ पुरुषलाई र महिलाका पाइलाहरूलाई त्यसकै बोझले सधैं गह्रौं बनाइदिन खोज्छ ।
प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:३३